सच्चा प्रेमका यी ७ निशानी थाहा पाइराख्नुस् - News 88 Post
सच्चा प्रेमका यी ७ निशानी थाहा पाइराख्नुस्
April 24, 2021 N88LeaveaComment on सच्चा प्रेमका यी ७ निशानी थाहा पाइराख्नुस्
हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा कसैनकसैसँग त प्रेम गर्छ नै । सबैको चाहना हुन्छ कि उसलाई जीवनमा कोही सच्चा प्रेम गर्ने मिलोस र जीन्दगी खुशीसाथ बिताउन पाइयोस् । संसारमा मायाँका कैयौ उहाहरणहरु पनि छन् । रोमियो जुलियट, लैला मजनु, मुनामदन जस्ता कैयौ प्रेम कहानीहरु छन् । यी कहानी बाहेक वास्तविक जीवनमा पनि थुप्रैका प्रेरणदायी कहानीहरु छन् होला ।
आज हामीले यहाँ सच्चा प्यारका ७ निशानीका बारेमा चर्चा गर्दै छौँ । यदि तपाईँ पनि कसैलाई सच्चा मायाँ गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँमा यी ७ गुण पाउनु हुनेछ । अथवा कसैले तपाईलाई मायाँ गर्छ भने पनि उसका ब्यवहारमा यी ७ गुण पाउनुहुनेछ । एक पटक ध्यान दिनुहोला । आज हामीले यहाँ चर्चा गरेका निशानी दुबै प्रेमी प्रेमिकामा हुनु जरुरी छ ।
१) सच्चा प्यार सधै अनकन्डिसनल हुन्छ
सच्चा प्यार जहिले पनि अनकन्डिसनल हुन्छ । त्यहाँ जहिले पनि मायाँ नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । मायाँ बाहेक अरु केही पनि आशा गरिएको हुँदैन । यसको हालत वा हैसियत हेरेर प्रेम गरिदैन । निशर्त मायाँ । कतिपय सम्बन्धहरुको शुरुवात नै सर्तहरुबाट हुन्छ । तिम्रा लागि गर्छु ऊ गर्छु वा गर्न सक्दिन जस्ता सर्तहरुबाट शुरु भएको सम्बन्ध धेरै लामो समय चल्न सक्दैन ।
२) तपाईँलाई बाध्य पार्दैन
सच्चा मायाँ गर्नेले कहिल्लै पनि तपाईँलाई कुनै पनि कुरामा बाध्य पार्दैन तपाईँको इच्छाबिपरित जोडजबरजस्ती गर्दैन । जहिले पनि तपाईँको सम्मान गर्छ । तपाईँको खुशीमा नै आफ्नो खुशी देख्छ ।
३) हरेक कुराहरु सेयर गर्छ
एक सच्चा प्रेमी आफ्नो मनको कुरा कहिल्लै पनि मनमा दबाएर राख्दैन सधै तपाईँसँग सेयर गर्छ । कतिपय मानिसकोहरुको स्वभाव नै मनमा कुरा गुम्साएर राख्ने हुन्छ, सानासाना कुराहरुमा पनि बिभिन्न खालका शंका उपशंकाहरु उब्जने यहीबाट सम्बन्धमा दरार आउन सुरु हुन्छ । त्यसैले मनमा लागेका तितामिठा कुरा सेयर गर्नुपर्छ ।
४) आफ्नो भन्दा बढी ख्याल राख्छ
सच्चा मायाँ गर्नेले जहिले पनि तपाईँको ख्याल राख्छ । ध्यान दिन्छ । तपाईँको खुशीमा खुशी र दुःख सहानुभुती प्रकट गर्छ । हरेकको चाहना पनि यही हुन्छ कि प्रेमीले आफ्नो ख्याल गरोस वा प्रेमिकाले ख्याल गरेको केयर गरोस् । साना साना कुराहरुले पनि मायाँ बढाउनमा निकै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । तपाईलाई सम्मान गर्छ, कहिल्लै पनि तपाईँलाई निचा देखाउने छैन । सानो होस वा ठूलो कुनै पनि निणर्य लिनुपर्दा एकअर्कामा सल्लाह गर्ने गर्छ ।
५) तपाईँको इच्छा बिपरित कुनै पनि कुरामा दबाव दिँदैन
सच्चा प्रेमी तपाईँको इच्छा चाहनाको हमेसा सम्मान गर्छ । तपाईँको खुशीका लागि उसले आफ्नो कुनै पनि कुरामा दबाब सिर्जना गर्दैन । तपाईलाई मन नपर्ने कुरा छ भने त्यस कुरामा कहिल्लै पनि बल गर्दैन ख्याल गर्नुस् । सच्चा प्रेमी खुशीमा मात्र होइन तपाई दुःख र तपाईँलाई जरुरत परेको समयमा सधै तपाईँको साथमा हुनेछ । उसले तपाईलाई आफ्नो पनको आभाष दिलाउने छ ।
६) भविश्यका योजना सँगै बनाउँछ
सच्चा प्रेमीले आफ्नो भविश्यको योजनामा सधै तपाईलाई साथ लिएर हिड्छ, वा सोंच्छ । सल्लाह गर्छ । कि जीवनभर तपाईँ उसको साथमा रहनुहुनेछ । मायाँको नाटक गर्नेहरु अथवा झुटो माया गर्नेहरु कहिल्लै पनि भविश्यका योजना बनाउँदैनन् । उनीहरुले भविश्यका कुरा आयो कि अनेक बहाना बनाएर टाल्ने गर्छन् ।
७) लोयल हुन्छन्, कहिल्लै धोका दिँदैनन्
सच्चा प्रेमी सबै लोयल हुन्छन् । कुनै पनि अवस्थामा तपाईलाई धोका दिँदैनन् । चाहे तापाईँको अवस्था जस्तो सुकै किन नहोस् ।
अन्तमा सच्चा प्रेमी/प्रेमिका खोज्जेअरु संसारमा धेरै छन् । त्यसरी सच्चा प्रेम जोडीको खोजिमा पहिला आफै सच्चा प्रेमी बन्न सिक्नुस् । नत्र त संसारमा भौँतारिने मात्र हो तपाईँ नै सच्चा मायाँ गर्न जान्नु भएन भने खोज्नेले कहाँबाट सच्चा मायाँ पाउँछ र ? स्वार्थी दुनियाँमा सच्चा प्यार पाउनै मुस्किल छ । त्यसैले पहिला आफू सच्चा हुनुस् ।
आजको राशिफल हेर्नुस् र माता मनकामनाकाे दर्शन गर्नुस्, मनाेकांक्षा पूरा हुनेछ
माधव नेपालले झाँक्रीलाई पार्टीको महासचिव बनाउने
यसरी बनेथ्यो सिंहदरबार, इतिहास पल्याएर हेर्दा
June 18, 2021 N88
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा नेताहरूका घर–घरमा पुगेर भेट गरेपछि, आगाे भए भीम रावल दिए ‘दनक’ !
September 9, 2021 September 9, 2021 N88